मोदी भ्रमणका अपेक्षा-जनकपुरमा भारतीय पर्यटक बढ्ने निश्चित छ «
मोदी भ्रमणका अपेक्षा-जनकपुरमा भारतीय पर्यटक बढ्ने निश्चित छ
प्रकाशित मिति : बैशाख २८, २०७५ शुक्रबार
जनकपुरमा भारतीय पर्यटक बढ्ने निश्चित छ
मोहन शर्मा लामिछाने
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज वैशाख २८ गते नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । उनी भारतको पटनाबाट नेपालको प्रदेश नम्बर २ को मुकाम जनकपुर विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि दुई पटक नेपाल आइसकेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणको सूची पहिलेको भ्रमणमा पनि थियो, तर प्राविधिक कारणले स्थगित भएको थियो । यसपटक भने उनले पहिलो भ्रमण जनकपुरबाट सुरु गर्ने भएका छन् । मोदीको स्वागतका लागि जनकपुरलाई दुलहीझैं सिँगारिएको छ । उनको भ्रमणका लागि २८ गते एक दिन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा र भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा निजी क्षेत्रले पनि केही न केही आशा एवं अपेक्षाहरू राख्ने गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यसपटकको भ्रमणमा अपेक्षाभन्दा पनि सम्बन्ध सुधार तथा धार्मिक पर्यटनको विकासबाट प्रदेश नम्बर २ लाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसै सन्दर्भमा बाराका व्यवसायी मोहन शर्मा लामिछानेसँग कारोबारकर्मी प्रकाश लम्साले गरेको कुराकानीको सार :
मोदीको भ्रमणले प्रदेशको विकासमा कस्तो असर पार्ला ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले प्रदेश नम्बर २ को विकास आगामी दिनमा अझ सहज र बलियो हुने निश्चित हुन पुगेको छ । अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा यो प्रदेशमा मोदीको आगमन आफैंमा बलियो उपस्थिति हो । हामी व्यापारीले यसरी बुझेका छौं । मोदी जनकपुर आउनु र नागरिक अभिनन्दन हुनुलाई सबै भारतीयले नियाल्नेछन् । त्यसबाहेक पनि नेपालकै आर्थिक प्रवेशद्वार रहेको यो प्रदेशमा अब भारतीय लगानीकर्ताहरूको समेत नजर पुग्ने निश्चित भएपछि विकासमा टेवा पुग्ने नै छ ।
मोदीको भ्रमणपछि यो प्रदेशलाई हेर्ने नजर परिवर्तन हुनेछ, उद्योग–कलकारखानाहरूले गति लिनेछन् र भारतीय पर्यटनको बाटो निश्चित खुल्नेछ ।
प्रदेश २ को सरकारलाई यो भ्रमण कतिको फलदायी होला ?
मुलुककै सम्बन्धको विकास गर्ने नवीकरणको सुनौलो अवसरका साथै प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई अवसरका रूपमा आएको छ यो भ्रमण । शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखलाई नागरिक अभिनन्दन आफैंमा एउटा विशाल अवसर हो, जुन २ नम्बर प्रदेशले पायो । त्यसबाहेक पनि रामायण सर्किटको जनकपुरधामले अब भारतभर चर्चा पाउनेछ । अब जनकपुरमा भारतीय पर्यटक बढ्ने निश्चित छ । मोदीको भ्रमणले भारतीय उद्योगीहरूसमेत यो प्रदेशमा आउने विश्वास बढेर जानेछ ।
आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध कस्तो हुनेछ ?
परापूर्व कालदेखि नै आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरैजसो एउटै परम्परा रहिआएकोमा यस पटकको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै कसिलो बनाउने र सुधार हुने मेरो विश्वास छ ।
विगतमा भएको नाकाबन्दीको तिक्ततालाई कतिको मेटाउला यो भ्रमणले ?
तिक्तता हटाउन मोदीकै अनुपम प्रयासस्वरूप जनस्तरबाट नागरिक अभिनन्दन ग्रहण हुँदैछ । मोदीको यो भ्रमणले सबै खाले तिक्तता हटाई तिनलाई इतिहासमा सीमित पार्ने प्रयास हुने मेरो बुझाइ छ ।
मोदीको शिरदेखि पाउसम्म भ्रमण हुँदैछ, के अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालमा धार्मिक स्थलहरू रहेर पनि हुन सक्छ, आफैंमा मनोरम सुन्दर यो देश मोदीले बुझेका छन् । राजनीतिक पाटोभन्दा पनि धार्मिक गतिविधिमा मोदी सहभागी हुनु स्वाभाविक हो, किनकि उनी धार्मिक आस्था राख्ने नेता हुन् ।
#नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघ
#प्रदेश नम्बर २
इन्टरनेटमा प्रतिस्पर्धा बढ्दा उपभोक्तालाई फाइदा
पछिल्लो समय इन्टरनेटको आवश्यकता र महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ को
प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि उद्योग व्यवसाय क्षेत्र उपेक्षामा प-यो
प्रदेश–२ सरकारको बजेटले वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई केही पनि हेरेन । सबैभन्दा ठूलो माग हाम्रो के
संघीय बजेटमा प्रदेश – २ को गुनासो
कोरोना महामारीको संकटले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कोरोनाले प्रभावित आर्थिक क्षेत्र
दुग्ध क्षेत्रमा कोभिडको असर
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सरकारले १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा गरेको छ । निषेधाज्ञाको कारणले
बलियो टोलीसँग खेल्न पाउँदा नेपाली फुटबलको स्तर सुधारिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ
कतार विश्वकप छनोट र एसियन कप छनोटमा नेपालले कुवेत भ्रमण गरेर आइतबार साँझ नेपाल फर्किएको
प्रचुर स्रोतबीच समृद्धिको सपना धकेलिएको धकेलियै छ
४० वर्ष सरकारी सेवामा बिताएर सेवानिवृत्त गोपीनाथ मैनाली कर्मचारी प्रशासनभित्र इमानदार व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् ।